Dhallinyaro is-xilqaamay oo howlgal nadaafad ah ka fuliyay xaafadda Buundo-weyn, Beledweyne - Radio Ergo
(ERGO) – Guddi dhallinyarada magaalada Beledweyne ah oo is-xilqaamay ayaa howl nadaafad ka fuliyay xaafadd Buundo-weyn kaddib markii saddex meel Laanta Isbartiibo ee xaafaddaas ah lagu soo daadiyay waxyaabo dhacay oo ay ku jiraan nacnac iyo buskud, kuwaasi oo la sheegay in labo cunug oo xaafadda degan ay calool xanuun ka qaadeen markii ay cuneen.
Guddigaan dhallinyarada mutadhawiciinta ah oo ka kooban 12 qof ayaa nadaafadda ay xaafadda ka fuliyeen waxaa ka caawiyay dadka deegaanka, iyagoo sidoo kale kaashaday 5 qof oo muruqmaal ah oo ay siinayaan maalintii $50 isu geyn. Lacagtaas waxaa iska soo ururiyay guddiga.
Axmed Maxamed Yuusuf oo ah madaxa guddiga ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in qashinka ay uruuriyeen ay hal meel is kugu geeyeen ka hor inta ay dab qabadsiinin.
Axmed ayaa sidoo kale xusay in kooxdiisa ay wacyigalin u sameysay waalidka xaafaddaas si carruurtooda ay uga ilaaliyaan nacnaca iyo buskudka dhacay ee la soo daadiyay.
Maxamed Cismaan Weheliye oo deggan xaafadda Buundo-weyn ayaa sheegay in uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee qashinka arkay markii lagu soo daadiyay halkaas, wuxuuna tilmaamay in carruur badan oo dooneysay inay cunto uu ka qaaday.
Guddoomiyaha Laanta Fiiltaro ee xaafadda Buundo-weyn, Keenadiid Xuseen Sandhool ayaa sheegay inay xireen 2 qof oo lagu qabtay iyagoo qashin hor leh ku shubaya meelihii ay dhallinyaradu ka shaqeynayeen nadaafaddooda.
Muqdisho: Dhallinyaro barakac ah iyo kuwo jaamacado ka qalinjabiyay oo shaqo ka helay shirkado kalluumaysi